Nianiana Ny Tsy Hiverina Intsony Ilay Kiobàna iray Nanova Taovam-pananahana Ho Vehivavy Nifonja Indray Mandeha Tany Kiobà, · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Febroary 2016 11:52 GMT
Ana Marrero, nanova taovam-pananahana ho vehivavy, nilaza fa nalefa tany am-ponja tany Kiobà matetika izy noho ny nanaovany ny manja maso sy akanjonà vehivavy. Credit: Tim Padgett/WLRN. Nomen'ny PRI fahazoandàlana
Ito lahatsoratr'i Nadege Green ho an'ny The World ito dia niseho voalohany tao amin'ny PRI.org ny 28 Janoary 2016, ary naverina nalefa eto noho ny fifanarahana fifampizaràna vontoaty.
Ana Marrero, nanala ny tànan'akanjony ary naninjitra ny tànany havia.
“Tany amin'ireo fonja Kiobàna, nanandrana tamin'ny fotoana maro ny hamono tena tamin'ny antsy aho,” hoy izy.
“Uno, dos, tres, quarto, cinco, seis, siete, ocho,” nanisa tamin'ny fiteny Espaniôla izy. Manisa ireo ratra efa nanolatra eo amin'ny tànany izy. Toy ireo marika tsatoka mirirana izy ireo.
Amin'izao, somary mora ny mivezivezy eo anelanelan'i Etazonia sy Kiobà, fa ireo Kiobàna sasany tsy manana tombontsoa amin'ny hiverenana any amin'ny tany niaviany.
Indrindra ho an'ireo Kiobàna nanova taovam-pananahana, sahala amin'i Marrero, 54 taona, izay nipetraka tany Kiobà tamin'ny taona 60 sy 70. Tamin'izany fotoana izany, nanana zavatra hentitra nandrasana tamin'ny lahy sy ny vavy ny governemanta Kiobàna ary nandefa matetika tany am-ponja sy toerana fanaovana asa an-terivozona ireo olona mitia mitovy fananahana aminy sy ireo nanova taovam-pananahana mba hanao ilay nantsoina hoe “fanovàna ny fomba fiaina.”
“Tena nahatsiravina io,” hoy i Marrero, izay nitsoaka an'i Kiobà ny taona 1980 nandritra ny fifindramonina Mariel. “Tsy afaka nanana fiainana mihitsy izahay. Tamin'izany fotoana izany, tena taraiky be sy ratsy fanahy ny governemanta Kiobàna amin'ny resaka fitiavan'ny samy mitovy fananahana.”
Nilaza izy fa azon'ireo mpiandry fonja ratsy fanahy atao amin'izay tiany ireo voafonja mitia mitovy fananahana aminy sy ireo nanova fananahana.
“Nifanena tamin'ny lehilahy tia lehilahy, nanana nono natoraly lehibe aho, ary nanelingelina ireo manampahefan'ny fonja loatra ka nataon'izy ireo ny fandidiana azy mba hanalàna ireo nonony,” hoy izy.
Nahatsapa tena ho vehivavy hatramin'ny fahakeliny i Marrero. Any Kiobà, nitondra sy nanao ireo akanjo sy manja mason'ny mamany izy — ary nandoa lafo ny vokany.
“Tao anelanelan'ny 10 ka hatramin'ny 18 taona aho, matetika no tany am-ponja tany Kiobà. Noho ny tsy nanovàko fitondratena fotsiny,” hoy izy.
Efa miova izany Kiobà izany, ilay Kiobà izay fantatr'i Marrero.
Mariela Castro, zanaka vavin'ny Filoha Raul Castro, no talen'ny Ivontoeram-panjakana an'ny governemanta ho an'ny Fanabeazana momba ny resaka Fananahana, ary mpiaro mahery fo ny vondron'ny olona tia ny mitovy fananahana aminy sy nanova fananahana any Kiobà — ary nitarika ny diabe manohitra ny tsy fitiavana ireo olona mitia mitovy fananahana aminy mihitsy tany Havana.
Ny taona 2013, nandany lalàna ny parlemantan'i Kiobà, lalàna mandràra ny fanavakavahana any amin'ny toeram-piasana mifototra amin'ny firehan'ny fitiavana ara-nofo. Nifidy nanohitra io fandraràna io i Mariela Castro, izay mpikambana amin'ny parlemanta ihany koa, satria tsy hita tao ny fiarovana ny olona nanova fananahana.
Hatramin'ny taona 2008, nanome fanovàna fananahana tsy andoavam-bola i Kiobà tamin'ny alàlan'ny rafitry ny fahasalamam-bahoaka.
“Any Kiobà, zotra mihisatra be io,” hoy i Castro tamin'ny Daily Xtra, vohikala Kanadiàna izay maneho ny vondron'ny olona mitia ny mitovy fananahana aminy. “Miezaka ny manorina fiarahamonina vaovao izahay, fa zotra mandeha mihisatra be ny fanovàna ny eritreritry ny olona.”
Nampian'i Castro hoe any Kiobà, mbola miparitaka be ny tsy fitiavana olona mitia ny mitovy fananahana aminy sy ny olona nanova fananahana.
Mariette Pathy Allen, Amerikana mpakasary, naka sary ireo nanova fananahana ho vehivavy tany Kiobà hatramin'ny taona 2013.
Hoy i Allen ho an'ireo vehivavy nihaona taminy, “tena fiainana sarotra io”
Na misy aza ireo fandrosoana sasany miseho amin'ny hetsika LGBT any Kiobà, maro amin'ireo nanova fananahana ho vehivavy nalain'i Allen sary no milaza fa mbola ataon'ireo polisy sotasota ihany izy ireo ary tazoniny. Nilaza ihany koa izy ireo hoe tsy mety mahazo asa.
“Tsy manana safidy hafa afa-tsy ny mandeha mivaro-tena ny ankamaroan'izy ireo,” hoy i Allen.
Ary eo ihany koa ny fandrahonan'ny herisetra, indrindra any ivelan'i Havana.
Ny fiandohan'ity taona ity, notorahana mandra-pahafatiny ny olona iray nanova fananahana ho vehivavy tany akaikin'ny tanànan'i Pinar del Rio any andrefana, araka ireo tatitry ny media Kiobàna. Milaza io ho heloka bevava fankahalàna ireo mpikatroka mafana fo any Kiobà.
Kanefa, maro ireo teboka mampiseho fanantenana kely ho an'i Mariela Castro ary angamba mety ho endriky ny fiovàna lavitra ezaka ho an'ireo Kiobàna nanova fananahana.
Any Miami, miteny i Marrero hoe mahafantatra izy fa misy ny fiovàna ho amin'ny tsara miseho any Kiobà.
“Nanova ary nanokatra zavatra betsaka tany i Mariela Castro,” hoy izy. “Raha tany i Mariela Castro fony aho nipetraka tany, mety hoe tsy voatery nankaty aho.”
Nilaza i Marrero fa niainany taty Miami tamin'ny fanombohan'ny fanaovana sesitany ny vondrona Kiobàna ihany koa ny fankahalàna olona nanova fananahana niainany fony izy nipetraka tany Kiobà.
Nilaza izy fa matetika ireo polisy Kiobàna-Amerikana no manakana azy ary miampanga azy ho mpivarotena. Manontany izy ireo na vavy izy na lahy ary mampiditra resaka ara-nofo tsy iriana aminy.
“Nahatsapa tena ho tena tsy manan-kery aho,” hoy izy.
Satria tosiny mihisatra ny fiovàna miseho any Kiobà, milaza i Marrero fa mahita fanekena bebe kokoa an'ireo olona nanova fananahana any Miami ihany koa izy.
“Amin'izao, afaka mandeha malalaka kokoa aho. Afaka mandeha any amin'izay tiako aleha. Ary afaka ny ho izay tiako aho, tsy miatrika fanavakavahana be,” hoy izy.
Ary na eo aza ny fiverenana ho amin'ny ara_dalàna amin'ny fifandraisan'i Etazonia sy Kiobà ankehitriny, mbola tsy te-hiverina any an-tanindrazany ihany izy.
“Tena niaritra fikorontanan-tsaina be aho tany Kiobà. Mety hampahataitaitra ahy ny hiverina any. Tsy tia hiverina any aho, na hoe mitsidika fotoana fohy fotsiny aza.”
Vao maika miha-hentitra ny fanapahankeviny rehefa mijery ny tànany izy. Fahatsiarovana maharitra ny fotoana izay tsy nampalalaka azy — tsy nahafahany niseho amin'ny maha-izy azy — ireo holatra nataony tamin'ny tenany navelan'ny fiainany tany amin'ny fonjan'i Kiobà.